Tianjin Anxintongda သံမဏိပိုက် Co. , Ltd မှ - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
သငျသညျမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် Tianjin ANXINTONGDA သံမဏိပိုက်လုံး GROUP CO ။ , LTD မှ။
အကြိုသွပ်ရည်စိမ် Hollow အပိုင်းပြွန်
GI coil / သွပ်ရည်စိမ် coil
PPGI coil / မစမီခြယ်သ ...
GL coil / Galvalume ကွိုင်
PPGL coil / မစမီခြယ်သ ...
GI / GL မြှောင်းပုံ ...
PPGI / PPGL မြှောင်းပုံ ...
ANGLE BAR / သံမဏိ ANGLE
BLACK သံမဏိ ANGLE
Tianjin Anxintongda သံမဏိပိုက် Group မှ Co. , Ltd မှအဆိုပါ Tianjin စက်မှုဇုံတွင်တည်ရှိသည် - Daqiuzhuang စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များပန်းခြံ, Jinghai ကောင်တီ, Tianjin မြို့, တရုတ်, ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်သံမဏိပိုက်, ပြွန်နှင့်ကွိုင်၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 50000 စတုရန်းမီတာ 500000 တန်နှစ်ပတ်လည်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏ဧရိယာဖုံးလွှမ်း
ထုတ်ကုန်များ၏သံမဏိစီးရီး system.For တစ်ဦးပြည့်စုံနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကျနော်တို့, 14 အော်တိုဂဟေထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစုစုပေါင်းခြောက်ယောက်လက်အောက်ခံစက်ရုံရှိသည်, လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ထက်ပို 40000 tons.We လည်း4ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း galvanizing နှစ်ခုရှိသည်ဟုဖြစ်ပါသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှု company.The Tianjin Fangya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Co. , Ltd မှသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပို့ကုန်ကုန်သွယ်မှုထောက်ပံ့ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ဖောက်သည် demand.Our ထုတ်ကုန်တွေ့ဆုံရန်ကျယ်ပြန့်အဆောက်အဦးများအတွက်အသုံးပြုကြသည်, တံတား, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း, culverts နှင့်အခြားအလျားလိုက် formwork support.Our ထုတ်ကုန်အများအပြားမှတင်ပို့, နှစ်ဦးစလုံးဟာပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဈေးကွက်တွင်ကောင်းစွာရောင်းချ နိုင်ငံများနှင့်တိုင်းဒေသကြီးများ။ အဆိုပါငြမ်းပိုက်အပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန် ERW သံမဏိပိုက်, Hollow အပိုင်း-စတုရန်းပြွန်, သွပ်ရည်စိမ်စတီးပိုက်များ pre, Hot, GI / GL ကွိုင်, PPGI / PPGL ကွိုင်, မြှောင်းပုံမိုးမိုးစာရွက်, ထောင့်သံမဏိဘားနှင့်များစွာသောအခြားအထူးသွပ်ရည်စိမ်သံမဏိပိုက်နှစ်ပြီးသော သံမဏိပြွန်စတာတွေရိုက်ထည့်နှစ်စဉ်တင်ပို့မှုထက်ပိုမို 100,000 တန်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖောက်သည်များ၏အများစုအဘို့, "တိုးတက်မှုများအတွက်ကြိုးပမ်း, ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်များ" သည် "ဖောက်သည်ပထမဦးဆုံး" နိယာမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒဿန၏မူဝါဒအောက်ပါအတိုင်း။ ကျနော်တို့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ရေရှည်မှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ clients များနှင့်အတူတစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးပြုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအားလုံးသည်န်ထမ်းများကသင်၏လာမယ့်အဘို့အသငျသညျမှကြိုဆိုပါ၏!
မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်: 0086-18722321843 (Whatsapp / WeChat)
မွန် - တနင်္ဂနွေ: ညနေ6မှမနက်9နာရီ, 24 နာရီ: လိုင်းန်ဆောင်မှုတွင်
Sat - Sun က: ပိတ်ထားသော; 24 နာရီ: လိုင်းန်ဆောင်မှုတွင်